နိုင်ငံရေး လူမျိုး/ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ၀ါဒဖြန့် နေသော pages တွေဟာ နေပြည်တော် စစ်ရုံးချုပ်မှ ချုပ်ကိုင်ခိုင်းစေနေကြောင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« တရုပ် တွေဗုးံခွဲနေတာ ဆိုရင် အစိုးရ က မသိပဲနေမလား?
Rohingya in Rakhine history »
နိုင်ငံရေး လူမျိုး/ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ၀ါဒဖြန့် နေသော pages တွေဟာ နေပြည်တော် စစ်ရုံးချုပ်မှ ချုပ်ကိုင်ခိုင်းစေနေကြောင်း
“0nline ၀ါဒဖြန့် လှုံ့ဆော်ရေးကို နေပြည်တော် စစ်ရုံးချူပ်မှ ကြိုးကိုင် လှုပ်ရှားနေ” ==============================
My Prayers: May SOB Bama Buddhist Tat ma taw and ALL of its leaders will go to HELL.
============= ကျွန်နော့ နာမည်က ဗိုလ်ကြီး ဖြိုးသက်ထွန်းပါ..မိသားစုက ကနေဒါနိုင်ငံမှာ နေပါတယ်။ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အပတ်စဉ်(၃၇ )သင်တန်းဆင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ တပ်ရင်း(၈၅/၉၉) နဲ့နေပြည်တော် စစ်ရုံးချုပ် တို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ မျက်လုံးအားနည်း ချို့ယွင်းမှု့ ကြောင့် ဆေးပင်စင်ယူကာ ကနေဒါနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ Online စာမျက်နှာတွေကနေ နိုင်ငံရေး လူမျိုး/ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ၀ါဒဖြန့် နေသော pages တွေဟာ နေပြည်တော် စစ်ရုံးချုပ်မှ ချုပ်ကိုင်ခိုင်းစေနေကြောင်းကို ကျွန်နော် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးသမျှ သိကျွမ်းထားသလောက် ဖောက်သည်ချပါ၇စေ..။
Online ပေါ်မှာ ၀ါဒဖြန့်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို အစပြုခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၁ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း လောက်ကပါ…ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ် အသုံးပြုတက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချ ရလောက်တဲ့ တပ်မတော်သား အယောက်(၆၀)ကို နေပြည်တော် စစ်ရုံးချုပ်ဝန်းအတွင်း ရှိ ဧရာဝတီအဆောင် ကွန်ပျူတာခန်းမမှာ တစ်လတိတိ သင်တန်းပေး ကန့်သွင်းကာ အယောက်(၅၀)ကို ဆန်ခါတင် စီစစ်ေ၇ွးချယ်ခဲ့ပါတယ်…ဘာစီမံချက်အတွက် ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ၀ါဒဖြန့်ခိုင်းစေခဲ့တာလဲ ဆိုတာကိုတော့ သိပိုင်ခွင့်မရှိသလို တပ်ရဲ့ အစဉ်လာအရ အထက်ကအမိန့်ရှိသည့်အတိုင်း တသဝေမတိမ်း နာခံရစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Online ၀ါဒဖြန့်ရေးစီမံချက်အတွက် ကျွန်နော်တို့ကို အဖွဲ့တွေဖွဲ့ကာ တာဝန်တွေကိုယ်စီ ခွဲပေးထားပါတယ်။၀ါဒဖြန့် သတင်းဆောင်းပါးတွေ ဒိုင်ခံရေးပြီး pages တွေမှာတင်ပေးရတဲ့ အဖွဲ့၊pages တွေမှာ လှုံ့ဆော်ရေးသတင်းတင်လိုက်ရင် ကိုယ့်ဘက်ကနေ အလံခြူးလုပ် ပြီး posts တွေအောက်မှာ comment ၀င်ရေးကာ ပြန် share ပြီး ဖြန့်ဝေပေးရတဲ့အဖွဲ့၊ အစိုးရကောင်းကြောင်း သတင်း ဆောင်းပါးတွေနဲ့ လူမျိုး/ဘာသာ သွေးကွဲအမြင်စောင်း စေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို နိုင်ငံခြား ဘလော့ဂ်တွေကနေ ရှာဖွေပေး ရတဲ့ (ဥပမာ-Anti-Islam,Ban Islam,Islam Virus)ကဲ့သို့ ဘလော့ဂ်တွေ ကနေ လူမျိုး ဘာသာမုန်းတီးရေး အကြောင်းအရာတွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းရတဲ့ အဖွဲ့ ဆိုပြီး တာဝန်တွေ ခွဲပေးထားတယ်။ကျနော်တို့ အဖွဲ့မှာ တစ်ယောက်ကို နာမည်ပေါင်းစုံနဲ့ acc (၁၀)ခု (၁၅)လောက်ဆီ ဖွင့်ပြီးလှုပ်ရှားစေခဲ့ပြီး နေ့ပိုင်း ညပိုင်းခွဲပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင် ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ အပိုင်းကတော့ ၀ါဒဖြန့်တဲ့ posts တွေအောက်မှာ accပေါင်းစုံနဲ့ ထောက်ခံတဲ့ဘက်က comment ၀င်ရေးပေးရပြီး အများသိအောင်ပြန်လည် ဝေမျှဖြန့်ချိပေးရတဲ့ တာဝန်ပါ။ကျနော်တို့ကို တိုက်ရိုက် ညွှန်ကြား ကြပ်မတ်တာကတော့ စစ်ရုံးချုပ်ရဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာနက ညွှန်ချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေကိုယ်တိုင် အနီးကပ် အမိန့်ပေး ညွှန်ကြားတာပါ။ညွှန်ချုပ်ကြီးတွေကိုတော့ ဘယ်လို အကြီးအကဲတွေ ခိုင်းစေနေတာလဲ ဆိုတာကို သိပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ Online သုံးနေတဲ့ ပြည်သူတွေ သတိမထားမိလို့ပါ ကျွန်နော်တို့ ၀ါဒဖြန့်တဲ့ pages တွေ တိုင်းမှာ NLD နဲ့ ဒေါ်စု မကောင်းကြောင်းတွေ အတိုက်အခံပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်း ဆောင်တွေရဲ့ အပြစ်အနာအစာတွေကို ဟုတ်တာကော မဟုတ်တာကောရောပြီး ဆော် နေတာပါ။ပြီးတော့ ကုလားတွေ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့ အကြောင်းတွေကို အသားပေးပြီး ဖွပေးကာ ပြည်တွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းကို အချိန်တက်စေမယ့် လုပ်ကြံသတင်းဆောင်းပါးတွေကြည့်ေ၇ွးချယ်တင်ပြနေတာပါ။ဆရာတော် အရှင် ၀ီရသူနဲ့ ၉၆၉ အဖွဲ့ကိုလဲ ထောက်ခံအားပေးအားမြှောက်ပြုပေးတဲ့ ဘက်က အမြဲလိုလိုရပ်တည် ဖော်ပြပေးရပါတယ်။ဒါတွေက policy တွေဆိုတော့ ဘာရည်ရွယ်ချက်ကို ဦးတည်သလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းရခက် ပါတယ်။ကျွန်နော်တို့ကတော့အထက်အရာရှိကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးရတာပေါ့ ပြည်သူတွေက မြင်အောင်မကြည့်ကြလို့ပါ သေချာဂရုစိုက်ပြီး သုံးသပ်ကြည့်ရင် ထင်သာမြင်သာရှိပါတယ်။ (“လူထုမောင် ကာဠု “တို့ “ဗဟုသုတ ဟင်းပေါင်းအိုးကြီး”တို့လို pages တွေနဲ့ အလား တူ pages ပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိပါသေးတယ်) ဒီလို ၀ါဒဖြန့်လှုံ့ဆော်ရေးတွေက မြန်မာနိုင်ငံရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး အခြားနိုင်ငံ တွေမှာလဲ ရှိပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရပါတီရဲ့ သက်တမ်း ရပ်တည်မှု့ရှည်ကြာရေး အတွက် နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး လှည့်ကွက်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ လူမျိုးေ၇း ဘာသာရေး တိုက်ပွဲ ပုံစံဂွင်ဆင်ဖန်တီး၊တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းသုံးပြီးအာဏာရပါတီ သက်ဆိုးရှည်ဖို့ ကျိုးပမ်းတဲ့သဘောတွေပေါ့။ ကျွန်နော့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ပတ်သက်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ကိစ္စကိုယခုလို ဖွင့်ချရတယ် ဆိုတာအကြောင်းရှိပါတယ်။တပ်မတော်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအစိုးရကိုချောက်တွန်း သလို ဖြစ်နေပေမယ့်ပြည်သူတွေအပေါ် လုပ်ကြံသင်းတွေနဲ့ ပွဲဆူအောင်ဖန်တီးကာ အမုန်းပွား အာဃာတမီးတွေ တောက်လောင်စေအောင် မီးမြှိုက်ပေးနေရတာ ကိုယ့်ကို သူ မသတီဖြစ်လာသလို ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေအတွက်လဲ နောင်တကြီးစွာ ရမိလို့ပါ။ကျွန်နော် တို့အဖွဲ့ထဲမှာလဲ အထက်အရာရှိတွေရဲ့ အမိန့်ကြောင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ၇ပေမယ့် ဒီလို အလုပ်မျိုးကို မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေ အတော်များပါတယ်။ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေနဲ့လဲ ကိုက်ညီမှုမရှိလေတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အပြစ်တွေကျူးလွန်နေရသလို ခံစားလာရပါတယ်။ ကိုယ့်ပယောဂကြောင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲမှု့တွေ သေကြေပျက်စီးကာ ဘ၀ပျက်သွား သူတွေရှိနေတာ မြင်နေတွေ့နေ၇တော့ စိတ်ထဲ မသိုးမသန့်ဖြစ်မိတာအမှန်ပါ။ဒီဝဋ်ကြွေး တွေကို တစ်နေ့ပြန်လည် ပေးဆပ်၇မယ်ဆိုတဲ့ အသိက မသိစိတ်ကို ချောက်လှန့်နေတော့ တာဝန်ကြောင့်သာ ထမ်းဆောင်နေ၇တယ် စိတ်ထဲမှာ မပျော်ရွှင်မိပါဘူး။ တပ်မတော်ကနေ မျက်လုံးခွဲစိတ်၇မယ် အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဆေးပင်စင် ယူပြီး နိုင်ငံခြားကို ထွက်ခွာလာရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းခံ ကတော့ ပြည်တွင်းဘာသာရေး ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြမ်းဖက်မှု့တွဖြစ်တော့ မိဘများကိုယ်စား ကျွန်နော့ကို ဒီလိုဘ၀မျိုးရောက်အောင် ပြုစုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ဦးကြီးတို့မိသားစု ဘ၀ပျက်ကာ ဒုက္ခသည်စခန်းရောက်ခဲ့ရပါတယ်။မီးရှိူ့ဖျက်ဆီးခံလိုက်၇လို့ ရှိတဲ့ စီးပွားလည်းပျက်သွားပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု့ပါခံစားနေရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကို အထက်ကို တင်ပြတော့မသိကျိုးကျွံပြုကာ သီးသန့်အနေနဲ့ ဘာကူညီထောက်ပံ့မှု့ မျိုးမှ မလုပ်ပေးခဲ့ပါဘူး၊ဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်ထားခဲ့ပါတယ်။ကျနော့ဘ၀ကို လူတလုံးသူတလုံး ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင် ပေးခဲ့တဲ့ သူတွေ ကိုယ့်ပယောဂ မကင်းတဲ့ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု့တွေကြောင့် ဘ၀ပျက်ခဲ့ ခြင်းဟာ ကျနော့ကို တပ်မတော်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့Online ပေါ်မှာ နိုင်ငံရေး လူမျိုးဘာသာ သွေးခွဲလှုံ့ဆော် ၀ါဒမှိုင်းတိုက် နေခြင်းရဲ့ ရည်၇ွယ်ချက်ကို အတိအကျ သိရှိ မခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းစဉ်အောက် ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဆယ်သွယ်ရေး ကွန်ယက် ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပွင့်လင်းမှုရှိလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ အာဏာရပါတီနဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ကြီးစိုးချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အနာဟောင်းတွေကို ဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်ဖို့ 0nline ၀ါဒဖြန့်ချိရေးကိုဒိုင်းကာဗာသဖွယ် အသုံးပြုရန် နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု့ရှိစ သတင်းကဏပိုင်းမှာ ဆာလောင်နေတဲ့ ပြည်သူ တွေကို သတင်းမှားတွေဖြန့်ချိမှိုင်းတိုက်ကာ နိုင်ငံရေးမှာ စိတ်ကြိုက်ချယ်လှယ် အုပ်ချုပ် နိုင်ဖို့လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူအားလုံး ဆင်ခြင်သတိပြုကာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်အတွင်း အသုံးချခံနေရခြင်းမှ လွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သရင်းေ၇ှာင်ကျဉ်သတိပြုနိုင်ကြပါစေကြောင်း….။ ဗိုလ်ကြီး ဖြိုးသက်ထွန်း(DSA-အပတ်စဉ် ၃၇ ) ကနေဒါနိုင်ငံ(ခေတ္တ) သတင်း ဘုရင် ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ မူရင်းလင့်ခ် > > > http://kingsofnews.blogspot.com/2013/10/blog-post_4346.html
This entry was posted on October 20, 2013 at 10:25 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.